Google tuurista shukumaanka: iibso Cronologics si loo hagaajiyo Android Wear | Wararka IPhone
Haddii ay jirto hal shay oo aan ka baranay taleefannada casriga ah, taasi waa, ugu yaraan hadda, maahan aalado loogu talagalay qof walba. Waxaa jira saacado yar oo caqli-gal ah ama nidaamyadooda soo socda, waxaana ka mid ah Apple Watch oo ah sida ugu fiican ee smartwatch guud, Fitbit iyo jijimooyin qaar la mid ah oo ah tiro isboorti isboorti iyo, in lagu daro qaar kale, Dhawaan ayaa la joojiyay Dhagax iyo Samsung Gear. Maxaa ku saabsan Android Wear? Ma ahan wax aad u cad, laakiin horeyba waa loo xaqiijiyay taas Google waxay iibsatay Cronologics iyada oo looga dan leeyahay hagaajinta nidaamkeeda hawlgalka ee saacadaha casriga ah.
Cronolgics lafteeda ayaa xaqiijiyay helitaanka shirkadooda Google ee boggeeda internetka, halkaas oo ay na xusuusinayaan inay bilaabeen tacabirkoodii 2014 «sida madal loogu talagalay saacado kala duwan oo caqli badan«. Hawlaha kale ee ay 'Cronologics' ku lahaan doonaan nidaamka qalliinka ee saacadaha casriga ah ee Google waa ka caawi Android Wear 2.0 iyo dhammaan nidaamyada smartwatch ee mashiinka raadinta ee la bilaabi doono mustaqbalka. Oo waxaan xasuusnaano in Android Wear 2.0 ay diyaar u ahaayeen horumariyayaashu muddo dheer, laakiin weli ma jiro taariikh rasmi ah oo lagu daah-furay oo la qorsheeyay.
Cronologics waxay kaa caawin doontaa Android Wear 2.0 wixii ka dambeeya
Kooxda 'Cronologics' waxay samaysay jidkoodii hore iyo dib: waxay ka tageen Google iyo Android si ay u abuuraan shirkad ay iyagu bilaabaan oo badeecadoodu ahayd Nidaamka hawlgalka ee ku saleysan Android ee loogu talagalay smartwatches, Google waxay aragtay in waxa ay sameynayeen ay fiicnaayeen oo ay dib u saxeexeen si ay u hagaajiyaan nidaamkooda hawlgalka saacadaha casriga ah.
Laakiin waa maxay dhibaatada haysata Android Wear? Dhinac, waxa aan ka faallooday bilowga qoraalkan: saacadaha casriga ah looma qorsheynin dhammaan adeegsadayaasha. Dhinaca kale, noocyada bilaabay kii ugu horreeyay iyo kuwa ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'Android Wear watts' ma aysan bilaabin moodallo cusub dhowaan, taas oo soo jeedinaysa inaysan helin soo dhaweyntii ay filayeen. Si ka duwan Apple Watch iyo isdhexgalka qumman ee ay ku wada leedahay nidaamka deegaanka ee Apple oo dhan, Android Wear waa nidaam aad u da 'yar oo hawl socodsiin ah oo wali waddo dheer u baahan in la maro, gaar ahaan haddii aan tixgelinno kala qaybsanaanta ka dhalanaysa in aan awoodno inaan nidaamka ku rakibno ficil ahaan la soco wixii qalab ah.
Waxay umuuqataa Cronologics waxay la shaqeyneysay Google in muddo ah, ama markaa waxaan ka fikiri karnaa haddii aan tixgelinno in Android Wear 2.0 uu leeyahay waxyaabo badan oo la mid ah nidaamka hawlgalka ee Cronologics. Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxa kaliya ee aan dhihi karo ayaa ah waxaan rajeynayaa in Google ay si aad ah ugu sharadayso suuqa smartwatch si Apple aysan ugu nasan laadkeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Android » Google kuma tuurto tuwaalka: iibso Cronologics si loo hagaajiyo Android Wear
Microsoft waxay sheegaysaa inay ka faa’iideysaneyso isticmaaleyaasha ku lumay MacBook Pro